Mukuru webato rePeople Democratic Party, VaTendai Biti, vanove zvakare sachigaro wekomiti inoona nezvehwaro hwehupfumi hwenyika, vati havawoni hurumende yeZanu PF ichitevedza zvayakatura mubhajeti iro rakaturwa neChina.
“Saka tiri kuti isu veMDC Alliance, ngatigadzireyi nyaya yelegitimacy, ngatigadzireyi free and fair elections, ngatigadzireyi nyaya yepolitical and institutional reform, ngatigadzireyi nyaya ye economics,” VaBiti vaudza Studio7
VaBiti vatiwo zvirongwa zvekuderedza huwandu hwemari inoshandiswa nehurumende zvakaita sekudzinga mayouth officers basa haushandi nekuti pane vashandi vakawanda zvikuru vehurumende vasina mabasa avanoita vanofanira kubviswa pabasa kana kuti maghost workers.
“Saka pane nyaya yekuti zvonzi vanhu ngavaregedze basa wane 65, asi tiri kuti imi vana Chinamasa mune 70-years, Mnangagwa maane ma75-years, so kana tiri kuregesa vhanu mabasa, ngatiregeseyi harawa dzese dziri 65-years and above. Number two, tiri kutorerei ma youth officers 3,000, yet tine ma ghost workers 200, 000. Ngativabvisei vese,” VaBiti vatsanangura
VaBiti vati MDC Alliance ine hurongwa hwanakana chose hwekumutsiridza hupfumi hwakaita sekurega kushandisa mari yemaBond Notes pamwe nekuti nyika ishandise maRands ekuSouth Africa.
“Tiri kuti isu, ngatiite financial sector reform. Hakuna mari mumabhangi, vanhu vari kurara mumabhangi, mapensioneers havana mari, saka tiri kuti ngatibvise chipuka chegreen chinonzi bond note, tochi enda ku South Africa kwatinojoina ... tochingoshandisa rand zvakango daro daro”
Vanotiwo havatsigiri nyaya yegurukota rezvemari, VaPatrick Chinamasa yekuti mauto apindire munyaya dzehupfumi.
“Zvatiri kuona zvekuti masoldier ndivo vari kuita semapurisa, izvozvo hazvitarisirwi, hazvina kunaka," wawedzera VaBiti.